SM-A920F/DS | SM-A920FZKDMYM | MYANMAR MM
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး quad camera ထူးခြားထင်ပေါ်တဲ့စတိုင် ကျယ်ပြန့်ထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်း
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး quad camera
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး quad camera နဲ့လေးဆတိုးပြီးပျော်လိုက်ကြရအောင်
အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ အံ့ဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမဲ့စတိုင် နဲ့ အရောင်အသွေးစုံလင် တဲ့ Galaxy A9 ရဲ့ပေးအပ်မှုတွေကိုရယူလိုက်ပါ။ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး quad camera နဲ့ လှပဆန်းသစ်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုဖမ်းယူလိုက်ပါ။၆.၃ မျက်နှာပြင်ကျယ်နဲ့ Dolby Atmos ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အသံစနစ်တို့ကိုခံစားကြည့်လိုက်ပါ။သပ်ရပ်ပြီးပိုမိုပေါ်လွင်တဲ့ဒီဇိုင်းတို့ကြောင့် သင့်ရဲ့လက်ထဲမှာ သက်တောင့်သက်သာ ကိုင်ဆောင်နိုင်မဲ့အပြင် သင့်ရဲ့အာရုံခံစားမှုကို ဖမ်းစားစေမှာပါ။
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး quad camera နဲ့စမတ်ဖုန်း
ရင်သတ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံအလန်းစားတွေကို ရယူနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းအများကြီးတွေထဲကမှ လေးဆကိုရှာဖွေရယူလိုက်ပါ။ Galaxy A9 မှာပါဝင်တဲ့ rear camera လေးလုံးကြောင့် သင့်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်များစွာကို ဖမ်းယူနိုင်တော့မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။Scene Optimizer နဲ့ Flaw Detection ကဲ့သို့ intelligent ကင်မရာစနစ်ပါဝင်တဲ့အားသာချက်ကြောင့် သင့်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်လှပနေစေမှာအသေချာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက် သင့်မြင်ကွင်းထဲစွဲထင်ကျန်ရစ်မဲ့ပုံရိပ်တွေကို ရယူလိုက်ပါ။Galaxy A9 မှာ ပါဝင်တဲ့ 2x optical zoom နဲ့အတူ 10MP Telephoto Camera က လူပုံကို အဓိက ရိုက်ကူးရင်ဖြစ်ဖြစ် အရောင်အသွေးများကို ရိုက်ကူးရင်ဖြစ်ဖြစ် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကင်မရာ Filter များက တကယ့်ကို အသေးစိတ်သဘာဝကျကျနဲ့ ပီပြင်စွာ ဖမ်းယူပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို ထူးခြားထင်ပေါ်အောင် ရိုက်ယူလိုက်ပါ
Live Focus Mode နဲ့ သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံမှာ မိသားစုတွေ သူငယ်ချင်းတွေတူတူ ပုံရိပ်တွေရိုက်ယူလိုက်ပါ။5MP Depth Camera နဲ့ Main Camera တို့ကို ချိန်ညှိယူပြီး နောက်ခံကိုလည်း blur လုပ်ရင်း Pro Level look ဖြင့် သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံများကို အလန်းစားတွေရအောင်ရိုက်ယူလိုက်ပါ။
Galaxy A9 ရဲ့ 24MP Main Camera က တောက်ပတဲ့နေရောင်အောက်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ညအမှောင်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် အလင်းထိန်းညှိပေးမှုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ညဘက် သို့ အမှောင်ထုထဲမှာတောင် တောက်ပနေစေဖို့ ကင်မရာက အလင်းပိုမိုထည့်ပေးပြီး ထိထိမိမိအသေးစိတ်ကျကျ ရရှိဖို့အတွက် noise များကိုလျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
Galaxy A9 မှာပါဝင်တဲ့ intelligent ကင်မရာစနစ်ကြောင့် အလိုအလျောက်ကာလာအနုအရင့်ညှိနိုင်ခြင်း၊သင့်ရဲ့ ဓါတ်ပုံမှာပါဝင်တဲ့ Subject ကိုအလိုအလျောက် detect လုပ်နိုင်တဲ့ Scene Optimizer ပါရှိခြင်း၊အဖြူ နဲ့ အလင်းအမှောင်တို့ကို အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။သင့်ပုံရိပ်ကို သင့်စိတ်ကြိုက် သဘာဝအတိုင်း ရရှိစေနိုင်ဖို့ကိုလည်း 19 modes လည်းပါဝင်ပါတယ်။
*19 modes available with Scene Optimizer: Food, Portraits, Flowers, Indoor scenes, Animals, Landscapes, Greenery, Trees, Sky, Mountains, Beaches, Sunrises and sunsets, Watersides, Street scenes, Night scenes, Waterfalls, Snow, Birds, Text. **Accuracy of Scene Optimizer may differ depending on surrounding conditions or subject.
သင့်စိတ်ကြိုက်ပုံရိပ်တွေရရှိစေဖို့ ကူညီပေးမဲ့ အသိပေးချက်
Rear camera ကတော့ သင့်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေဘယ်လိုအံ့ဝင်ခွင်ကျဖြစ်မလဲဆိုတာတွေကိုပြောပြပေးနေမှာပါ။Flaw Detection ကတော့ သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံမှာ မျက်လုံးမှိတ်တာတွေ နောက်ခံအလင်း နှင့် မျက်နှာပေါ်မှာမှုန်ဝါးနေတာတွေ တစ်စုံတစ်ရာလွဲမှားနေရင်တောင် intelligent ဖိုတိုအကြံပေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့ အသိပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်စိတ်ကြိုက် ပြန်လည်ရိုက်ယူနိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
*Accuracy of Flaw Detection may differ depending on surrounding conditions or subject.**Flaw detection detects Eye Blink, Facial Blur and Backlit.***Blink and blur detection works best when there are three or fewer people in the frame, 1.5 meters or closer to the camera. ****Backlit flaw detection sends notifications every 24 hours when flaws are detected and works when HDR mode is turned off.
သင့်ရဲ့ Selfie Skills တွေကို ပိုမိုမြင့်တင်လိုက်ပါ
Galaxy A9 24MP front camera မှာပါဝင်တဲ့ ဖန်တီးစွမ်းအားတွေကြောင့် ညအမှောင်ထဲမှာတောင် noise လျော့ချမှုနဲ့ ကြည်လင်တဲ့ selfies တွေ ရရှိစေမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဓါတ်ပုံတွေမှာ စိတ်ကူးထဲကဖန်တီးမှုတွေ ထည့်သွင်းခြင်း
Emoji တစ်ခုအဖြစ်သင့်ကိုသင်ပြောင်းလဲကြည့်ပါ။ပါတီဦးထုပ် သို့ animal noses တွေကိုယူပြီး သင့်ရဲ့မျက်နှာကို ကိုပြောင်းလဲကြည့်လိုက်ပါ။ကင်မရာ လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုး အပြင် AR စတစ်ကာ နဲ့ filters များ၊ AR Emoji များပါဝင်တာကြောင့် သင်ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေမှာ သင့်စိတ်ကူးထဲကအတိုင်း ဖန်တီးမှုတွေကို ပေါင်းထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Galaxy A9 က သင့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျနေမယ့် စိုပြေတောက်ပတဲ့ စတိုင်က အခုခေတ်စားနေတဲ့ အရောင်အလန်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ အနက်ရောင်၊ပန်းရောင်၊အပြာရောင်၊ တွေနဲ့ဆိုတော့ စတိုင်ကျလှပစေပြီး သင့်လက်ထဲမှာ သက်တောင့်သက်သာရှိနေစေမှာသေချာပါတယ်။
Galaxy A9 ရဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ၆.၃ လက်မ Infinity Display ဟာ ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ စာရိုက်ခြင်း၊ ဗီဒယိုကြည့်ခြင်း နဲ့ internet ကြည့်ရှုခြင်းစတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်အတွေ့အကြုံသစ်ကိုရရှိစေမှာပါ။
Galaxy A9 မှာပါဝင်တဲ့ Always On Display လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ နေ့ရက်၊ ရာသီဥတု၊ အချိန် နဲ့ သတိပေးချက် အစရှိတဲ့ အရေးကြီး အချက်အလက်တွေအပြင် ဘက်ထရီ Level ဖော်ပြချက်ကိုပါ လျင်မြန်စွာ မြင်တွေ့စေမှာပါ။
လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်ချက်
လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာနဲ့ အလုပ်တွေအများကြီးကို တပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။ Galaxy A9 ရဲ့ App Pair နဲ့ဆိုရင် အက်ပ်၂ခုကို တပြိုင်တည်းဖွင့်ပြီး အသုံးပြုရတာ ပိုပြီးလွယ်ကူစေပါတယ်။ သင်ဟာ ဗီဒီယိုကြည့်ရင်း မက်ဆေ့ခ်ျ ပိုတာမျိုးတွေကို တပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Galaxy A9 ရဲ့ လျင်မြန်ချောမွေ့စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Octa-Core processor နဲ့ 6GB သို့ 8GB RAM ပေါင်းစပ်မှုတို့ကြောင့် တပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကို စွမ်းအားမြင့်ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ
Galaxy A9 ရဲ့ 128GB internal memory ကြောင့်သင့်ရဲ့အချက်အလက်များစွာကို သိမ်းဆည်းနိုင်မယ့်အပြင် 512 GB ထိလက်ခံနိုင်တဲ့ micro SD ထပ်ထည့်ပြီး သင့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပိုမိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ထပ်တိုးလာမယ့် ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ တခြားအချက်အလက်တွေကို စိုးရိမ်စရာမလိုပဲ အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
Galaxy A9 မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ 3,800mAh (typical) ဘက်ထရီ ကြောင့် အနီးအနားမှာရှိတဲ့အားသွင်းကြိုးကိုလိုက်လံ ရှာဖွေနေစရာမလိုဘဲ သင့်ရဲ့ ချက်တင် နဲ့ ဂိမ်းကစားတာတွေကို အချိန်ပိုမိုကြာကြာအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။Type-C ကြိုးက ပိုမိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်ရုံသာမကဘဲ လျင်မြန်လွယ်ကူစွာအားသွင်းခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်မှာပါဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အကြားအာရုံကို Dolby Atmos ရဲ့ ပြည့်ဝတဲ့အသံစနစ်တွေနဲ့ မြှင့်တင်လိုက်ပါ။ သင့် စိတ်ကြိုက်သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေထဲကအတိုင်း အပြင်မှာ ခံစားနေရသလို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ 3D effect က သီချင်းတွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေမှာ စီးမျောနေစေမှာ အသေအချာပါပဲ။
အဆင်ပြေလွယ်ကူစေတဲ့ unlock ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်း
ကိုယ်ပိုင်စနစ်နဲ့ ကာကွယ်ထားနိုင်မယ့် လုံခြုံရေး
ဖုန်းကို သင့်မျက်နှာနားမှာ ကိုင်ထားပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖုန်းလော့ခ် ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ မတော်တဆ တခြားသူလက်ထဲကို ဖုန်းရောက်သွားရင်တောင် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်တွေမပေါက်ကြားစေဖို့အတွက် Face Recognition နည်းပညာက အာမခံပေးနိုင်ပါတယ်။
သင်ယုံကြည်ရတဲ့ လုံခြုံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဖုန်းတွင်းဝင်ရောက်မှုကို ထားသိုလိုက်ပါ။ Galaxy J7 မှာပါဝင်တဲ့ စိတ်ချရတဲ့ လက်ဗွေရာဖတ် စနစ်ဟာ website ဒါမှမဟုတ် apps တွေထဲသို့ဝင်ရောက်မှုမှာ ကာကွယ်ပေးရုံ တင်မဟုတ်ဘဲ multitasking လုပ်တဲ့အခါမှာလဲ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေမှာပါ။
လျှို့ဝှက်စွာ ကာကွယ်ထားနိုင်မဲ့ လုံခြုံရေး
Samsung ရဲ့ ကာကွယ်ထားတဲ့ စာတွဲဖိုင်လ် (Samsung Secure Folder) က သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သိမ်းဆည်းထားချင်တဲ့ လျှို့ဝှက်ထားချင်တဲ့ ပုံတွေ၊ မှတ်တမ်းတွေ၊ အသံဖိုင်လ်တွေကို အဆင့်ဆင့်ကာကွယ်ထားနိုင်တဲ့ ခိုင်မာတဲ့ လုံခြုံရေးစနစ် (Samsung Knox) ပဲဖြစ်ပါတယ်
App တစ်ခုထဲမှာ ချတ်အကောင့် နှစ်ခု နဲ့
Galaxy A9 က သင့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆက်သွယ်မှုတွေကို လွယ်ကူစွာ ပိုင်းခြားထားလို့ရပါတယ်။Dual Messenger နဲ့ဆိုရင် မတူညီတဲ့ ချက်အကောင့်တွေနဲ့ တူညီတဲ့ Messegner အက်ပလီကေးရှင်းတွေမှာ ဆက်သွယ်လို့ရနေပါပြီ
Bixby နဲ့တူတူ ပိုမိုလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ
Bixby က သင့်အကြိုက်ဆုံး appတွေထဲမှာ ရောက်ရှိနေမှာဆိုတော့ အချိန် ၊ နေရာနဲ့အတူ လွယ်ကူစွာ သင့်ရဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်လို အထောက်အကူပေးနိုင်မှာပါ။သင်ဖြတ်သန်းကျော်ဖြတ်ရမယ့် တနေ့တာမှာ သင်ဖုန်းကို သုံးစွဲပုံကိုလေ့လာပြီး သင်အသုံးပြုတဲ့ ပုံစံပေါ်မူတည်ကာ သင့်အတွက်အသုံးဝင်မယ့် အက်ပ်တွေကို စီမံပေးနိုင်ပါတယ်။ Bixby button လေးကို ဖိ၍ဘဲနှိပ်နှိပ်၊ 'Hi Bixby' လို့ခေါ်လိုက်ပြီး စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်